Home Wararka Dhaqaale xumi lasoo daristay shacabka Puntland & Wasiiradii oo baxsad ah
Dhaqaale xumi lasoo daristay shacabka Puntland & Wasiiradii oo baxsad ah
Waxaa gabi ahaanba laga dareemayaa deegaanada hoosyimaada Dowlad Goboleedka Puntland dhaqaale xumo baahday oo saameysay guud ahaan shacabka ku dhaqan Puntland gaar ahaan dadka ku nool magaalooyinka waa weyn.
Mid kamida gacasatada ku dhaqan magalaada Garowe ayaa u sheegay Warbaahinta gaarka loo leeyahay in suuqyadii ganacsiga ee Garowe ay gabi ahaanba dansan yihiin. “ Walaal iyada oo markii hore lacagtii sarifka ay dhulka la gashay dhaqaalaha Puntland ayaa waxa taa inoogu darsamay ganacsi la’aan oo maba jirto cid lacag haysata oo wax iibsan karta”.
Waa uu intaa ku dary “ Bal eeg maqaayadaha ka furan Puntland, waxaa ka jro wax aan waligeed la arkin oo aan la maqalin, cid lacag haysata ma jirto, midkii kuugu fiican ayaa deyn ku weydiisanaya.. tani oo kale sanadahan nama soo marin”.
Dhanka kale, kali bar golihii wasiirsada ee Puntland way isaga tageen shaqadii iyaga oo intooda badan baxsan u ah dowlada Federaal. Wasiir kastaa waxa uu musharax u yahay in uu xildhibaana= ka noqdo baarlamanka Federaal. Taasna waxa ay keentay in ayan jirin cid iska xilsaartay in ay wax ka qabato dhaaale xumida baahsan ee ka jirta Puntaknd..
“Hadii ayan Puntland helin caqlai iyo hogaan ka duwan kan hada helin, ama kan jira laftiisu uusan wax iska badalin Puntland waa loo yaabaa”.Sidaas waxa yiri mid kamida aqoon yanahada Puntland oo ka gaabsaday in aan magaciisa sheegno.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa lagu eedeynayay in uu ku mashquulay doorashada Dowlada Federaalka halka uu cidleeyay mas’uuliyadii loo egmaday ee ahayd inuu ka shaqeeyo dhsimanaha iyo hogaanka Puntland.